အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကို fettuccine - တရုတ်အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကို fettuccine ပေးသွင်း,စက်ရုံ -Qianna
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကို fettuccine
အော်ဂဲနစ် adzuki bean ကို fettuccine adzuki bean ကိုမုန့်ညက်ဖန်ဆင်းထားသည် , ရေ . ဒါကြောင့်အများအပြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်.
1. အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Booster:
Adzuki ပဲမျိုးစုံကိုယ်အလေးချိန်တိုးမြှင်ဘို့လိုအပ်နေပါသည်. သူတို့ကသင်တစ်ဦးကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီ. ဤသည်ကိုသူတို့ကယ်လိုရီအတွက်အလွန်နိမ့်များမှာနှင့်သင့်အစာအိမ်ကိုတက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်, ထိုသို့သောအားဖြင့်သင်တို့ကိုလျော့နည်းစားနောက်ဆုံးမှာသင်အချိန်တစ်ကာလအတွင်းပိုပြီးခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးကူညီအောင်. adzuki ပဲမျိုးစုံတစ်ခုမှာခွက်ကိုသာပါရှိသည် 300 ကယ်လိုရီ .
Adzuki ပဲမျိုးစုံစိတျနှလုံးအကျိုးပြုကြောင်းများစွာသောပရိုတိန်းဆံ့. ပရိုတိန်းဟာ LDL လက်စထရောကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့် HDL လက်စထရောကိုတိုးပွားစေ. ပရိုတိန်းနှင့်အတူ, သင်သည်လည်းခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ခွန်အား, အရွယ်အစားနှင့်ကြွက်သား .
Adzuki ပဲမျိုးစုံကိုလည်းနည်းလမ်းများစွာ၌သင်တို့ကိုအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးကိုဖိုင်ဘာဆံ့. အမှငျြ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင့်ရဲ့အူသိမ်အူမကနျြးမာရေး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကူညီပေးသည်. အချို့ကိစ္စမှာလည်းဖိုင်ဘာ၏စားသုံးမှုနှင့်အတူစိတ်တိုအူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏လျှော့ချရေးပြခဲ့ကြ .
ဗီတာမင်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ကင်ဆာကဲ့သို့အခြားအဓိကရောဂါများမှသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်အတွက်အလွန်အရေးပါလှတဲ့. ဤသည်မှာလည်းရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, အူမကြီးကင်ဆာနှင့်နှလုံးကင်ဆာ .
Adzuki ပဲမျိုးစုံမှာလည်းသွေးဖိအားများလျှော့ချရေးအတွက်ကူညီပေးသည်ကြောင်းပိုတက်စီယမ်ဆံ့ . လုံလောက်သောစားသုံးမှုလည်းကလေးငယ်အတွက်မွေးဖွားချွတ်ယွင်းရတဲ့ကနေတားဆီးနိုင်ပါတယ်.
Adzuki ပဲမျိုးစုံတစ်အသားအရေ exfoliator အဖြစ်ကိုလည်းသုံးနိုငျ. ဒါဟာအားလုံးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးများများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်. ဒီနေရာတွင်ကျိန်းသေကြိုးစားသင့်တစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်. သုံး adzuki ပဲမျိုးစုံ၏ဇွန်းနှင့်ရှားစောင်းလက်ပတ်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းယူပါ. အတူတူသူတို့ကိုရောထွေးနှင့်ရှိသမျှသောမကျြနှာကိုကျော်လျှောက်ထား. ထိုသို့နေထိုင်ကြစို့ 15 မိနစ်, ရေအေးနှင့်အတူချွတ်ဆေးကြောပါ. Adzuki ပဲမျိုးစုံမှာလည်းအသားအရေရောဂါကူးစက်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းလျှော့ချလူသိများကြသည် .
Adzuki ပဲမျိုးစုံအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ကျောက်ကပ်များအတွက်အကျိုးရှိသောများမှာ. ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အဆိုအရ, ဒါကြောင့်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်၏ချိန်ခွင်လျှာပြန်လည်အတွက်ကူညီပေးသည် . ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ် adzuki ပဲမျိုးစုံယူအကောင်းဆုံးက.
8. Detoxifies ခန္ဓာကိုယ်:
တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်မှတစ်ဦးကအကြီးအလမ်းသင့်ရဲ့အစားအသောက်များတွင် adzuki ပဲမျိုးစုံထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပဲမျိုးစုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရေပြားနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အသားအရေရဲ့ texture တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အချိန်ကျော်သငျသညျသိသိသာသာတောက်ပနှင့်ဆွဲဆောင်မှုစေမည်.
775KJ / 185k ကယ်လိုရီ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အော်ဂဲနစ် adzuki bean ကိုအမှုန့်, ရေ
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ adzuki bean ကိုတိုတောင်းခေါက်ဆွဲ(3.7မီလီမီတာ)
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အစိမ်းရောင်ပဲပုပ် fettuccine
အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့ပဲပုပ် fettuccine